मेलम्ची बाढी सुरु भएको ठाउँको ड'रला'ग्दो भिडियो, धेरै प्रयासपछि हेलिकप्टर अवतरण, यसरी धर्ती नै भासियो (भिडियो हेर्नुहोस) - Public 24Khabar
Home News मेलम्ची बाढी सुरु भएको ठाउँको ड’रला’ग्दो भिडियो, धेरै प्रयासपछि हेलिकप्टर अवतरण, यसरी...
मेलम्ची बाढी सुरु भएको ठाउँको ड’रला’ग्दो भिडियो, धेरै प्रयासपछि हेलिकप्टर अवतरण, यसरी धर्ती नै भासियो (भिडियो हेर्नुहोस)
उनका अनुसार गत असार १ गते आएको भीषण बाढीले लेदो भरिएका घर गए रातिको बाढीले बगाएको हो। ती घर खाली थिए। उनका अनुसार चनौटे ग्याल्थुम र ढुङ्गे्र बजार जोखिममा छन्।
हेलम्बु गाउँपालिका–४ को ढुङ्गे्र बजार पनि जोखिममा रहेकाले प्रहरी र सेनाले स्थानीयवासीका घरबाट सामान सार्न सहयोग गरिरहेका अधिकारीले जानकारी दिए। उनले जोखिम कायमै रहेकाले सजग रहन सम्पूर्णमा आग्रह गरे।
त्यस्तै बाढीले चार गोठ, एक पक्की पुल र एक झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। त्यस्तै एक फर्निचर उद्योग र एक रेडियोको भवन पनि बाढीले बगाएको छ। यस्तै बाढीले हेलम्बुका दुई पक्की पुल र दुई घरको अवस्था अज्ञात छ। हेलम्बु–२ को कात्तिके खोलामा रहेको पक्की पुल, हेलम्बुका वडा नं १ र २ जोड्ने घट्टे खोलामाथिको पक्की पुलको अवस्था थाहा हुन नसकेको हो।
Previous articleआमा छोरी खोप लगाउन जादा कर्णालीमा डुंगा दु’र्घ’टना हुदा यस्तो सम्म भयो !
Next articleमेलम्चीमा फेरि बाढी : हेर्दा हेर्दै आँखै अगाडी बगायो १२ घर ! फेरी आँ’सुमा डुब्यो मेलम्ची हेर्नुस (भिडियो हेर्नुहोस)